कसरी सुत्नेको व्यक्तित्व कस्तो हुन्छ ?
३ पुष २०७५, मंगलवार ०८:१४
स्कटल्यान्डको इडिनवर्गमा अवस्थित निद्रासम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था ‘स्लिप असेस्मेन्ट एन्ड एड्भाइजरी सर्भिस’ का निर्देशक प्रोफेसर क्रिस इजिकोवाक्सीले सयन स्थितिका मुख्य ६ आसनको अध्ययन गरेर व्यक्तित्वको अन्तरसम्बन्धलाई छर्लंग पार्ने कोशिस गरेका थिए। क्रिसका अनुसार जाग्रत अवस्थामा व्यक्तिको बडी–ल्यांग्वेजले व्यक्तित्वको बारेमा धेरै कुरा बताए पनि चेतना र व्यक्तिगत सजगताको कारणले सूक्ष्म व्यक्तित्वको सबै पक्ष नखुल्न सक्छ।
परन्तु सुप्त अवस्थामा व्यक्तिको व्यक्तिगत सजगता नहुने भएकाले सयन–आसनबाटै उसको सही व्यक्तित्वको धेर–थोर जानकारी लिन सकिन्छ।
फिटसः यो गर्भास्थ शिशुको जस्तो दायाँ वा बायाँतिर कोल्टे परी टाउको, हात र खुट्टा खुम्च्याएर सुत्ने स्थिति हो। यो स्थिति प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरु बाहिर धेरै कठोर तर आन्तरिक रुपले अत्यन्त कोमल मन भएको पाइएको छ। यस्ता व्यक्ति पहिलो पल्ट कसैसँग मिल्दा धेरै नखुल्ने, अल्पभाषी र लज्जालु लाग्न सक्छन् तर सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै गएपछि चाँढै सामान्य भई घुलमिल हुन थाल्दछन्। यो आसनको सबैभन्दा सामान्य स्थिति हो।
प्रा. क्रिसको अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार पुरुषभन्दा महिलामा प्रचलित सयन स्थिति प्रयोग गर्नेहरुको हिस्सा ४१ प्रतिशत छ। । फिटस स्थितिमा बायाँपट्टि कोल्टे परेर सुत्नेहरुमा आमासय, कलेजो र फोक्सो जस्ता अति संवेदनशील अंगहरुमा केही न केही समस्या भएको पनि पाइएको छ भने दायाँपट्टि कोल्टे परेर सुत्नेहरु तुलनात्मक रुपले स्वस्थ पाइएको छ।
लगः सर्वेक्षणमा सामेल १५ प्रतिशत सर्वेक्षित व्यक्तिहरु दायाँ अथवा बायाँतिर कोल्टे परेर हातलाई शरीरसँग टाँसेर सामानन्तर राखी खुट्टा नखुम्च्याई सुत्ने गरेको पाइएको छ। यो सयन स्थितिमा सुत्नेहरु सोझा–सिधा, सामान्य, सामाजिक र शान्त प्रकृतिका हुन्छन् भने नचिनेका व्यक्तिहरुमा पनि तुरुन्त विश्वास गर्न पछि हट्दैनन्। फलतः यिनलाई कसैले पनि उल्लु बनाउन सक्छ। यो स्थितिमा सुत्ने व्यक्तिहरु अत्यन्त सरल हुने भएकाले यस आसनलाई सोझाहरुको सयन आसन पनि भनिन्छ। ढाडलाई नमोडी सुत्नुपर्ने भएकाले यस स्थितिमा सुत्नेहरुमा कम्मर तथा ढाडको समस्या कम भएको पनि पाइएको छ।
यार्नरः सर्वेक्षणमा सामेल भएकामध्ये १३ प्रतिशतले यो सयन विधि अपनाइएको पाइयो। यस्ता व्यक्तिहरु खुट्टा नखुम्च्याई कोल्टे परेर, हातलाई शरीरको लम्बवत, अगाडिपट्टि सिधै वा हल्का मोडेर सुत्ने गर्छन्। यो स्थितिमा सुत्ने व्यक्तिहरु खुला मिजासका तर संदिग्ध तथा सन्काहा मनस्थितिका, निर्णय गर्न लामो समय लिने तर एकपटक निर्णय लिइसकेपछि सायदै बदल्ने, हरेक घटना र परिस्थितिलाई फाइदा–बेफाइदाको तराजुमा तौलिने र नयाँ कुरा तुरुन्त सिक्नसक्ने क्षमताका हुन्छन्। प्रा क्रिसका अनुसार यो सयन विधि अपनाउनेहरुमा एसिडिटी र निद्रामा निसास्सिने समस्या धेरै पाइएको छ।
फ्रिफलः सर्वेक्षणमा सामेल ८ प्रतिशत व्यक्तिहरु यस आसनमा सुत्ने गरेको पाइयो। यस्ता व्यक्तिहरु पेटको बलले सुत्ने तथा सुतेका अवस्थामा हात सिरानको आसपास राख्ने गर्दछन्। यो सयन विधि अपनाउनेहरु मिलनसार, बहिर्मुखी, चाँडै उत्तेजित भइहाल्ने, कठिन परिस्थितिमा अत्तालिने, व्यक्तिगत आलोचना नसहने, आन्तरिक रुपले धेरै नाजुक र घुसघुसे हुन्छन्। कामुकता र चञ्चलता यस आसनमा सुत्नेहरुको एउटा विषेशता हो भने पातलो छाला र मजबुत पाचनशक्ति अर्को विषेशता हो।
स्टारफिसः सर्वेक्षणमा सामेल व्यक्तिहरुमध्ये यस आसनमा सुत्नेहरुको सहभागिता ५ प्रतिशत थियो। यस स्थितिमा सुत्ने व्यक्तिहरु सहयोगी भएकाले प्रायः राम्रा मित्र साबित हुन्छन्। यो स्थितिमा ढाडको बलले, उत्तानो परी, खुट्टा फट्याएर, हात तकियाको आसपासमा राखी स्टारफिस माछाको आकृतिमा सुत्ने गरिन्छ। यो सयन विधि अपनाउनेहरु प्रायः सबैको कुरा सुन्न तयार हुन्छन्। यिनीहरु आकर्षणको केन्द्र बन्न चाहँदैनन्। स्टारफिस स्थितिमा सुत्नेहरुमा घुर्ने (स्नोरिङ), दुस्वप्न देख्ने र निद्रामा निसास्सिने समस्याबाट ग्रसित भएको पाइयो।